Nchịkọta ụgwọ maka mbido eCommerce: Nkọwa Nkọwa | Martech Zone
Ahịa metụtara azụmahịa bụ eziokwu nke ndụ maka ọtụtụ azụmaahịa, n'ihi ụgwọ a na-akwụghachi, ụgwọ a na-akwụghị ụgwọ, mgbanwe, ma ọ bụ ngwaahịa ndị a na-eweghachighị azụ. N'adịghị ka ụlọ ọrụ ịgbazinye ego nke ga-anakwere nnukwu pasent nke ọghọm dịka akụkụ nke ụdị azụmaahịa ha, ọtụtụ mmalite na-emeso mfu azụmahịa dị ka nsogbu nke anaghị achọ nlebara anya. Nke a nwere ike ibute spikes na nfu n'ihi enweghị omume ndị ahịa a na-ejighị n'aka, yana nzaghachi nke ọghọm nke enwere ike belata na obere usoro dị mfe. N'ime ntuziaka ndị a, anyị ga-enyocha ọnwụ ndị a, ihe kpatara ha ji eme, na ihe enwere ike ịme iji belata ha.
Ntuziaka a ga-enye aka karịsịa ma ọ bụrụ na ị bụ ma ọ bụ ahịa na-akwụ ụgwọ site n'aka ndị na-azụ ahịa na ndị na-ere ahịa bụ ndị nwere ike ịkọwapụta nke ọma ma ha anaghị enwe ike ịkwụ ụgwọ, ọrụ akwụ ụgwọ post (mgbasa ozi, SaaS, na ndị ọzọ) enweghị ike ịkwụ ndị ahịa ahụ enweghị ma ọ bụ ihe nkwụnye ụgwọ ejirila na faịlụ, ụlọ ọrụ eCommerce na ụlọ ọrụ ndenye aha na-akwụ ụgwọ na nkwụghachi ụgwọ ma ọ bụ njikwa ego na ọrụ ego na-enweta ACH nloghachi na ụgwọ ndị ọzọ echefuru.
Mfu na Ihe Mere Ha Ji Eme
Businesseslọ ọrụ na-aga nke ọma nwere ọtụtụ ndị ahịa, na ọtụtụ ndị na-azụ ahịa. Ezigbo azụmaahịa azụmaahịa na-adọta imirikiti ndị ahịa na-azụta, nata ngwaahịa na / ma ọ bụ ọrụ wee hapụ obi ụtọ. N'agbanyeghị nke ahụ, ụdị azụmaahịa ọ bụla nwere ike ịla n'iyi. Ọ bụ ezie na ọtụtụ n'ime ya nwere ike ịbụ ebumnuche, nyocha na-egosi na ọnụọgụ na-eto eto abụghị.
Ike nke ịzụrụ ihe n'ịntanetị agbanweela kpamkpam n'ime afọ iri gara aga. Yingzụta ịntanetị bụ ụkpụrụ ugbu a. Ma ọ bụ ọrụ nsụcha akwa ma ọ bụ akwụkwọ ọhụụ, anyị nwere kaadị kredit anyị echekwara ma zụta ihe 1-click, yana ibe ibata iji belata esemokwu. Ebe a na-azụta ihe nke ọma, yana iwu na-akwụ ụgwọ ụgwọ dị mfe, mere ka ọ dịkwuo mfe site na ịzụrụ obere esemokwu, na-eduga n'ịkwa ụta nke onye zụrụ ahịa na mmetụta nke ndị ahịa nwere ike ịjụ ịkwụ ụgwọ n'ihi na ụlọ ọrụ ga-anabata nke ahụ. Nnyocha na-egosi na ihe ruru 40% nke nloghachi na nkwụghachi ụgwọ bụ n'ihi ihe ndị a, na ọ bụghị n'ihi igwu wayo ma ọ bụ izu ohi njirimara. Ọ dị mfe, ọ na-adị ihe na-adịghị njọ, ọ nweghịkwa onye ọ bụla na-ere ahịa metụtara ya.
Dabere na azụmahịa gị, ụfọdụ mfu ga-mere site wayo na njirimara na-ezu ohi (na Chargeback Gurus tinyere nọmba ahụ na 10-15% dị egwu atụlere yana enyi na enyi). Ọ bụghị ihe ọhụrụ na ụmụaka na-eji kaadị nne na nna ha n’amaghị ama, mana ndị aghụghọ nọ na-arụsi ọrụ ike n’ebe ahụ, ọkachasị ka aghụghọ kaadị kredit na-abawanye. N'okwu ndị a, ị gaghị emeso ezigbo onye ahịa ahụ, mana mmadụ na-eji nkọwa ha.
Efu Ole Ka Is Ga-ezu?
Azụmaahịa ndị metụtara azụmahịa kwesịrị ịtụle akụkụ ha na ihe ndị chọrọ ịkwụ ụgwọ na-achọ. Imirikiti ndị na-enye ọrụ chọrọ ihe na-erughị 1% na nkwụghachi ụgwọ na ihe na-erughị 0.5% na nlọghachi ACH. Nwere ike "zoo" ụfọdụ nnukwu ihe egwu, ngalaba bara uru na olu gị ma ọ bụrụ na ọnụọgụ ọnwụ gị dị ntakịrị, mana ị ga-emerịrị ya n'ozuzu ya. Na ogologo oge, ọbụlagodi ọnwụ 1% na-agbakọta oge.
Mgbochi na Ọrụ
N'ime ụwa gbasara azụmaahịa, ọ bụ ihe ama ama oge ole ụlọ ọrụ na-etinye na mgbochi na nchọpụta tupu azụmaahịa agabiga, naanị ileghara mwepu ọnwụ na ọrụ anya kpamkpam.
Ifufu bu akuku azuma ahia obula, nihi na ileghara ihe efu anya putara igbochi gi — i ghapu ezigbo azumahia. FraudSciences, na ndị na-eweta mgbochi wayo n'oge gboo, nwere ike inyere ndị ahịa ahịa okpukpu anọ aka site n'ịchọpụta na ha agaghị akwụghachi ego ha. Should kwesịrị ịtụle ego ole ị na-ajụ n'ihi njirisi nke na-egbochi gị, yana ihe ọzọ ị ga - eme ma ọ bụrụ na ịnwee ọnụego ala.
Ọ bụrụ n ’ị na-enye ọrụ ma na-agbanyụ ya ndị ahịa na-anaghị akwụ ụgwọ, ikekwe ị ga-enwe ọnụego ọnwụ dị ala karị. Kwesịrị ịtụle mmadụ ole n'ime ndị ahịa ahụ ị nwere ike imeri site na ịnwa ịmezi nguzo pụtara ìhè na ịnụ ha. Ezigbo ọrụ ịla n'iyi na-elekwasị anya na ahụmịhe ndị ahịa site na idozi nsogbu ọrụ dịka ọ na-ewepụta ụgwọ ejiri gị.
Otú ahụ ka ọ dịkwa maka mfu wayo. Ọ bụ ezie na ụfọdụ n'ime ikpe aghụghọ ndị a dị adị, ọtụtụ bụ nsonaazụ nke nghọtahie ma ọ bụ nghọtahie ọrụ. Site n’inwe usoro ọrụ na-elekwasị anya na nghọta ebumnuche onye ahịa, ị ga-enwe ike melite njigide, kuziere ndị otu gị ụzọ isi gbochie ọghọm dị mma, ma kwụọ gị ụgwọ.
Anyị na-akwado ka ị rụọ ọrụ na mfu n'ụlọ n'ime izu ole na ole mbụ. Workingrụ ọrụ na ọghọm n'onwe gị nwere uru abụọ:
Ebe ọ bụ na ị na-eji akara gị iji kpọtụrụ onye ahịa, ọ ga-abụrịrị na ị na-eme ka gị na ndị ahịa nwere mgbagwoju anya wee jide ha.
Nagide ndị ahịa iwe nwere ike bụrụ ihe mmụta dị oke mkpa gbasara azụmahịa gị, ị chọghịkwa ịtụkwasị ndị ọzọ obi na-enye gị nzaghachi ahụ n'oge na-adịghị anya.
Enwere ihe abụọ ị ga - eme mgbe ndabara:
Bido ihe akpaghị aka mgbake usoro. Ọ bụrụ na ịkwụ ụgwọ kaadị kụrụ afọ, gbalịa ịchaji ya ọzọ ụbọchị ole na ole. Ọ bụrụ na ịkwụ ụgwọ ACH dara, tụlee ịnwale ọzọ (usoro ego maka ACH dị iche na ịnwalegharị dị mgbagwoju anya). Ọ bụrụ na ị nwere karịa otu usoro ịkwụ ụgwọ ejiri na akaụntụ ahụ, na-anwa ịbudata nke ahụ. Ekwesịrị isonye nke a yana mbọ iru mbọ.
Malite nnochite anya na onye na-akwụ ụgwọ gị. Ka oge na-aga, ị ga-amụta ụdị ihe akaebe achọrọ maka nnọchite anya ma mee ka ọ dịkwuo mma na ị tụfuo ebubo. I nwere ike na-na- 20-30% azụ iji usoro a.
Mgbe Nchịkọta Oge Gbalịrị ida
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-agbaghara iji ụlọ ọrụ nchịkọta ụgwọ iji weghachite mfu. Ulo oru a enwetala aha ojoo site n’ịnọgide na-eji ụzọ aghụghọ na ihe ọjọọ UX. Nke a bụ ebe ịhọrọ ezigbo onye òtù ọlụlụ dị oké mkpa; ịrụ ọrụ na ụlọ ọrụ teknụzụ nke ọkachamara na ahụmịhe onye ọrụ nke nchịkọta ụgwọ nwere ike inyere gị aka n'ezie.
Ọrụ mkpokọta outsourcing nwere ike ịkwado akara gị site n'inye ndị ahịa ụzọ iji gosipụta iwe ha tupu ịkwụ ụgwọ. Maka ndị ahịa jụrụ ịgwa gị okwu, ịnye usoro esemokwu siri ike mgbe ị na-arịọ maka ịkwụ ụgwọ bụ ụzọ dị irè iji ghọta ihe kpatara ha jiri gbanwee ego ha na mbụ.
Nke a bụkwa eziokwu maka ndị ohi wayo: inye ndị ahịa ụzọ dị mfe iji gosipụta onwe ha na ndị ọzọ na-enyekarị aka ịmata ọdịiche dị n'etiti ndị ezigbo wayo sitere n'aka ndị na-atụgharị uche na inye ndị aghụghọ wayo echiche nke nchebe na nghọta.
Mmefu azụmahịa bụ akụkụ nke azụmaahịa ma ha chọrọ nlebara anya. Iji usoro ime ụlọ dị mfe na onye ọlụlụ dị ike na-esite na ya nwere ike inyere gị aka ịkwụ ụgwọ, ghọta onye ahịa gị nke ọma, ọbụnakwa melite njigide.
Tags: ecommerce aghụghọenyi na enyichịkọta ụgwọ ụgwọmfu azụmahịa